Version 0.8.2 – 3 sano, 66 luqado, 1 WordPress
March 6, 2012 by dalabyo 21 Comments
Waxaan u sheegay in 3 Shumacyada on cake in!
Waxa jirtay muddo saddex sano ah (iyo saddex maalmood, iyo saddex iyo soddon saacadood) tan iyo version ugu horeysay ee plugin Transposh ayaa neefiyo on bakhaar plugin wordpress.org ee.
Time hubaal umado.
Kani waxa uu ahaa sanadkii ugu horreeyey boodid (29th February) iyo sanadka dhab ah boodid for Transposh. Plugin ayaa lagala soo bixi laga soo bakhaar oo in ka badan 50,000 times sanadkan iyo waxa uu sameeyey koritaanka joogta ah sawir oo tirada guud ee luqado taageeray. Markaasaa maanta dheeriga ah ee Hmong Daw nahay plugin ugu horeeyay si ay u taageeraan tiro total of 66 luqado.
Tani waxa ay ahayd a xaqiiqdii xiisa (sida in, waxay leeyihiin nolosha xiiso) sanadka ah ee warshadaha ee turjumaad automatic iyo plugins, halkaas oo Google ayaa ku dhawaad ​​hoos u taageero API ay (oo kaliya in ay u baddashaan nooc pay a) halka Bing soo rogeen xadka cusub. Transposh ayaa si guul ah ka adkaaday isbedel kuwa, halka plugins kale ma noolaan.
Waa maxay macnaha mustaqbalka qabataa for Transposh? Waxaan si tartiib ah karkaraya qaar cusub, shaqeeyo on aragtideenna si ay u hagaajiyaan website turjumaad, marka wax ay diyaar u noqon doonto – waxay noqon doonaa. Dhanka kale, taageeradiina joogtada ah waa muhiim noogu, mararka qaar email fudud ula “aad plugin waa weyn” gaadhifaraskiisa u kaxeeyaa noo sii wadi. Sidaas darteed haddii aad aaminsan tahay waxa aan si fiican u qabato, na hoos u line a, haddii aad u malaynayso in aan hagaajiyo waxyaabo, na hoos u qoraal, iyo haddii aad u malaynayso in aan nuugi, we fail to understand why you have read this message up to this point 😉
Nafteena talda Udub sanadka weyn 4th, maybe it will end with a bigger cake 🙂
Filed Under: Messages General, Shaaciyaan Release, Software Updates Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, dhalashadooda, yaryar, luqado badan oo, sii daayo, plugin wordpress
Version 0.7.4 – Version The springy
June 4, 2011 by dalabyo 8 Comments
Qof kasta u maleynayaa in waxa guga u taagan?
Sii daynta Tani waxay ku timaadaa xoogaa waqti dambe on our jadwalka. Laakiin waxaa hore u jebiyey diiwaanka download maalin by gudbayey 500 Markos.
Sii daynta Tani inkastoo yar yar ee dabiiciga ah ma ku leeyihiin qaar ka mid ah lagu daro fiican.
First, Luqadda dhigay in Transposh ee hadda la qaybsado mid ka mid ah oo la dhigay in si joogto ah WP_LANG ah, tani waxay u oggolaanaysaa a rakibaadda WordPress MU kaas oo site kasta waa la maareyn karaa luqad ka duwan on sidaa awgeed waxaan. Muujinta A kaas oo aan by dambeyntii jidaynayey aan waxar u leedahay inuu blog shakhsi gaar ah oo ku qoran luuqad ayuu u maamuli karaa diirsaday.
Waxaan ku daray shortcode Austrlia oo awood si ay wax soo saarka ee afka Transposh ee hada, inkasta oo aan la dhawaajin laga yaabaa sida badan, this daro yar oo u ogolaaneysaa displaying images kala duwan oo luqadood oo kala duwan, Waxaa ku saabsan waxaad ka akhrisan kartaa halkan.
Intaa waxaa dheer ah a geysid yar oo code Cole our, Haddeer oggolow Newspaper (ma users) in la beddelo dhaqanka Cole ayaa noo jebin jumlado on doodiisa weyn, eeg xagga sare ee parser.php for cadayn in our.
Isbedelka More daryaan kutaan waxaa ka mid ah:
Iframes ka mid ah gudaha pages hadda isku dayi doonaan in ay ka mid luqadda ku habboon
Kutaan go'an leh oo isticmaalaya = kaliya”iyo” dhimaya nabadgelyada ee shortcode ee Austrlia taas oo ka dhigtay detections qalad ah ee luqadda il dheeraad ah ee qofka,
Added turjumaad Jarmal by Jenny Beelens ka soo professionaltranslation.com
Enjoy version this, u sheeg asxaabtaada waxa ku saabsan, ha cadaawayaashiinna ma sheegi wax, qaba qareenada aad la tashato hadii aad u rabto in aad ha ilaawin muhiimadda ay leedahay qoyskaaga.
PS: Waxaan ognahay oo ku saabsan jadwalka Google Translate deprecation API iyo plugin uu weli shaqayn doona, faahfaahinta la qaawin doonaa in qoraalkii ka mustaqbalka.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: 0.7, yaryar, sii daayo, WordPress Daraasadii, plugin wordpress
Version 0.7.3 – Taageero Shortcodes
March 25, 2011 by dalabyo 55 Comments
Maanta waxaan sii daayay version 0.7.3 taas oo ku darayaa taageero for shortcodes gudaha wordpress posts, waxaa loo isticmaali karaa si ay u sameeyaan qaar ka mid ah walax nidaamsan iyo wixii aannu abuuray video kor ku xusan, sidaas darteed haddii aad leedahay shan daqiiqo oo lacag la'aan ah iyo wax ka fiican qaban, daawanayaan video ah. Haddii kale waxaan recommand lahaa reading dukumentiga at http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Qaar ka mid ah Ciidamada Kumandoska kutaan more daray in ay sii daayo this, inta badan yareynta load ah (iyo liiskii) in bots abuuro bogagga edit, iyo baabi'iyo files kulan baahnayn for bots.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: 0.7, yaryar, sii daayo, shortcodes, video, plugin wordpress
Version 0.7.2 – Saddexaad waxa ka soo
March 1, 2011 by dalabyo 11 Comments
Dhalashada labaad Happy ee plugin ah
Waxaan kaliya sii daayay version 0.7.2 la Nabhaan cayayaanka yar ah iyo saddex turjumaadaha Added to plugin ah.
Turjumay af talyaani by Marco Rossi
Translation Persian by Sushyant Zavarzadeh
Turjumay Spanish by Angel Torregrosa
Laba sano (iyo maalin) ayaa ka soo wareegtay tan iyo version 0.0.1 la sii daayay iyo hal sano tan iyo version 0.4.3 la sii daayay. In sanadkan waxaan lahayn 32,000 downloads marka la barbardhigo 13,000 ee sanadkii la soo hor, oo aan leeyihiin qaab ka badan oo ka sii yara koray wax soo saarka.
Waxaan doonayay in ay maanta u dabaal la sii daayo adeegga wakiil ah, laakiin nasiib xumo waa la daahin doonaa xoogaa, Si kastaba ha ahaatee – server ee dadaalka badan iyo wan weyn 24GB ugu dambeyntii waa ilaa (martigelin this site) iyo ugu dhaqsaha badan diyaar u ah inay Gudoomiye Burkuus waxaan noqon doonaa. Calankeena aad fikrado, talooyin, Erayo naxariis iyo wax laga yaabo in aad rabto in aad tuur us at.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: dhalashadooda, yaryar, sii daayo, plugin wordpress
Changeset in Transposh-WordPress [f5552f2]: Ku dar taageero FQDN beddelka rel. on saar block jeeg update ... June 17, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [1437f05]: Hagaajin parser si ay u taageeraan hreflang beddelka fqdn June 17, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [5e28fc3]: sii daayo v1.0.0 waa dhow June 15, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [bece739]: Update for files liisanka .js, iyo hadda kuwa kuma jiraan ... June 15, 2018